Muslimo Cabdullaahi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Geenyo Afrikaan ah guulihii uuntay midib gaar ah uu u hibeeyey baa tahay. Rabigaa wuxuu kuu qoray seegi maysidee sidaas say haku raadin. San ku neef aan kugu rabin sida Rabi uu ku uumay yuusan ku seegin akhiradaada iyo aduunkaadaba. Midib kaad qurxoon baad qaradaha adduunka oo idil oga soo cantahay. Taasi tusaale ha kugu filnaato, waa qurux iyo haybad rabi gaar kuu siiyey adi yeysan ku qaadın garaad xumi. Ha rogin midibkaada qaaliga ah gali maankaad guulihii ku uuntay in uu ka cilmi badanyahay. Garaad xumida yeysan ku qaadın dhayman baa tahay dhabti oo ay dhaayuhu ku doogsadaan. Meel …
Waxaan rabaa ın aan halkaan ıdınkula wadaago qıso yar oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelato qof fıkradaha dadka kale. Waxaan imid dal fok oo anan cidna ka garanaynin anigoo dan wayn lahaa, oo aan oga soo tagay xiligaas daar yaroo qurxoon mar dhow aan dhistay. Dantaa laaha waxay ahayd mid fog, oo xitaa dareen kastoo aan dareemayey aan dhagi jalaq usiin si aan guul u gaaro. Run ahaanti geesi ayaa jiro i garab taaknaa, rabay in aan guul gaaro gacaltooyo oo uu i qawo darteeda. Awaalkiisa waligay ma ilaabi doono sida wacan oo uu ii dheeri galiyey. Runta wuxuu …
Qoyska waa qayb nolasha ka mid ah, oo qoys la’aan cid jiri kartaa maba jirto. Qoysko qaybo badan ayuu ka kooban yahay. Marna waa mid yar marna waa mid wayn, oo in uu jiraa oo laga qeyb qaato hormarkiisa ayaa aad iyo aad u muhiim ah. Qoyska waa hormarka bulshada, sababtoo ah bulshadii qoyskeeda ay hormarsan yihiin ayaa hormar gaari kartaa. Nolosha waa mid iska imtixaan ah oo waxaa dhacda dhibaatooyin badan oo intooda badan saameeyso qoyska. Waa dhibaato weyn in la xalin waayo burburka qoysaska, maxaa yeelay dhibaatooyinka ayaa sii socon kara. Waxaa jira waxyaabo badan oo ka qeyb …
Nolosha waxaa jirra xiriira fara badan oo aan la soo koobi karin, xirriir walbana waxa uu leeyahay micna u gaar ah iyo shuruudo loo mara. Marka aan leeyahay waxa aan ka hadlayaa muhiimada uu leeyahay xiriirka, waxa aan raba in aan ka hadlo xirriiro badan oo aan jilcinay oo noogala baahnaa in aan adkayn, taasi awgeed aan ku suganahay dhibaatooyin fara badan. Xirriiradaas qaar ka mid ah ayaan ka hadli donaa waxaana ka mid: Xiriirka Alle iyo adduunkiisa kala dhaxeeya: Taasi waa mid cad oo uu qof walbo fahmi kara haddana waxaa dhacday in ay dayaceen dadka intooda badan. …
Ubadkaaga in uu ahaado mid leh akhlaaq wanaagsan waa wax adiga ka waalid ahaan kuu wanaagsan ubadkana u wanaagsan. Qofka mar uu yahay mid akhlaaq wanaagsan waa qof ixtiraama waalidiintiis, waa mid ixtiraama bulshada midka yar iyo midka wayn. Taasi waxa ay u sahlaysaa in uu noqdo qof bulshada ku leh ixtiraam fara badan. Ubadka marka uu yahay mid akhlaaq wanaagsan waa mid marna aan noqon mid ku caasiya waalidiintiisa. Akhlaaq wanaaga iskama timaado inta badan waxa ay ku xerentahay sida ay waalidka usoo tarbiyeyaan ubadkooda. Ubadka goorta aad ku tarbiyeyso diinta islaamka, wax uu noqdaa mid akhlaaq wanaagsan …
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa aan jecleestay in aan weydiiyo gabar in ay leedahay xiriir jeceyl iyo in kale, sababta aan u weydiiyey waxa ay ahayd, waa gabar waanagsan oo aan u rabay in uu guursado qof igu qaali ahaa. Laakiin waxaan ka maqlay gabadhii jawaab aad iga yaabisay oo ah “maxaa ka wadaa qof miyaad la socotaa, maad iwaydiisid imisaad la socotaa, saaxiibay midkeen ku baraa dumaashiyashaada way badanyihiin.?” Run ahaantii waxa ay ila noqotay arrin aan aad iyo aad aan ula yaabay. Markaas ayaan weydiyey “imisaa qofaadaa la socota?” waxayna igu tiri “illaa iyo seddax …
Si guud ahaan markaan ugu hadlo maandooriyaha waa waxa keeno dhibaato aysan dareensaneen isticmaalayaashiisa. Sida la wada ogyahay, xoolaha iyo bini’aadamka waxa lagu kala saraa waxyaabo badan oo ugu wayntahay caqliga, kaasoo u sahla bini’aadamka in uu ku kala doorto sax iyo qalad. Ruuxa inuu isticmaalo wax u kenaayo dhibaato waxaan oran lahaa kama warhaayo qatarteeda ama caqli malaha siddii xoolaha oo kale uu sax iyo qalad ku kal saari la yahay. Xittaa xoolaha way ka tagaan meesha ay ku dareemaan dhibaato laakiin ruux nool inuu isticmaalo wax dhib u keenaayo waa aqoondaro ama lahaansho caqli liita. Noocyada faraha …
Bulshada waxa ay ka koobantahay qaybo kala duwan oo fara badan, gabdhahana waa qayb ka mid ah oo laf dhabar ah. Si guud markaan ugu hadlo haweenka, waxa ay ku leeyihiin bulshda Soomaaliyeed doorwayn oo aan halkaan lagu soo koobi karin. Gabdhahana waa sidoo kale oo waxa ay ku jiraan tariikhda baal dahabi ah oo dhanka bulshda hormarintiisa ah, sababtoo ah waa kuwa u haylan markasta in ay qadaan masuuliyada reerkooda iyo reerka loo guuriyey. Oo ay usii dheer tahay in ay ka qayb qataan howlaha horumarinta dalka. Waxaa dhacda gabdhaha in ay noqdaan kuwa ka fikira reerkooda in …
Naas nuujin la’aanta waxa ay saamayn ku yeelan kartaa hooyada iyo ubadkaba, sababtoo ah kaliya faa’ido uma aha ubadka in la nuujiyo naaska, hooyadana waxaa ugu jira fa’idooyin fara badan aan la soo koobi Karin. Waxaa wanaagsan hooyada in ay nuujiso ubadka si ay ugu bad-baado cuduro fara badan, ubadkeeda yarna ugu bad-baadiso cuduro fara badan oo ka dhashay naasnuujin la’aantaas. Cuduradaas waxaa ka mid ah. Dhanka ubadka cudurada u sababa naas nuujin la’aanta: 1. Ubadka aan naas la nuujin waxaa ku dhaca cudurada ku dhaca habdhiska neefsashada jirka iyo habdhiska cunto shiidista jirka. Waxaa la ogaaday ubadka aan …